Hafatra avy amin'ny mpitarika ny indostrian'ny fihaonana sy hetsika amin'ny Coronavirus
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Hafatra avy amin'ny mpitarika ny indostrian'ny fihaonana sy hetsika amin'ny Coronavirus
Hafatra avy amin'ny mpitarika ny indostrian'ny fihaonana sy hetsika amin'ny Coronavirus COVID-19
Tamin'ny taratasy misokatra iray avy amin'ny mpitarika ny fivoriana sy indostrian'ny hetsika, izany hoe ny American Society of Association Executive, Destinations International, Events Industry Council, International Association of Exhibitions and Events, International Association of Venue Managers, Meeting Professionals International, PCMA, ary ny US Travel Association, ity hafatra ity dia nalefa momba ny Coronavirus COVID- 19:
Izahay dia mizara ny ahiahy momba ny coronavirus ary ireo fanontaniana asehon'ity fanamby ity. Ny fahasalamana sy ny fiadanam-bahoaka no zava-dehibe indrindra. Ny tanjona, mazava ho azy, na oviana na oviana ny fiahiahiana ny fahasalamam-bahoaka dia ny hitarihan'ny fampahalalana manam-pahaizana, mifototra amin'ny angon-drakitra siantifika sy ara-pitsaboana, ary nalaina avy tamin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny manampahefana ao amin'ny governemanta.
Rehefa maro ny fikambanana no mamaritra ny drafitra mifandraika amin'ny fitarihana fivoriana, kaonferansa, fivoriambe ary fampisehoana varotra - izay iangonan'ny olona amina vondrona marobe hitarika orinasa - dia ampirisihinay mafy ny fanapahan-kevitra hifototra amin'ny zava-misy fa tsy tahotra, noho ny haben'ny fiantraikan'ny mpiasa izay manohana ny indostrian'ny hetsika.
Na dia milaza aza ny manam-pahaizana ho malina ary mampihatra tolo-kevitra momba ny fahasalamana tsara indrindra izay mitovy amin'ny fisorohana ny gripa vanim-potoana, ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka dia tsy milaza fa tokony hisy fameperana ny fivezivezena na fialamboly na aiza na aiza any Etazonia. Zava-dehibe tokoa izany: tsy misy torolàlana ofisialy tokony hoferana na hofoanana ny drafitry ny dia any Etazonia.
Izahay dia tapa-kevitra mafy hanaraka ny fitarihan'ny manam-pahefana manam-pahefana momba ny fahasalamam-bahoaka ary vonona ny hiova araka ny baikon'ny toe-draharaha, saingy tsy misy fampandrenesana ofisialy fa tokony hoferana amin'ny lafiny rehetra ny dia, mamporisika ny fitohizan'ny dia tsy ho voatanisa izahay.
Fikambanana maro (tafiditra ato amintsika) no manohy mandrindra sy manao fivoriana sy hetsika manerana an'i Etazonia, ary miarahaba sy manohana ny fanapahan-kevitra izahay hanao izany soa aman-tsara, tsy ho an'ny fitohizan'ny asa ihany, fa ho an'ireo mpiasa amerikanina an-tapitrisany maro izay mandeha manohana isan'andro.
Ny fanapaha-kevitra hanafoana ny fivoriana sy ny hetsika dia miteraka fiatraikany lehibe amin'ny toekarena amerikanina sy amin'ireo mpiasa izay voakasiky ny fihenan'ireo tranga ireo ny asany sy ny fivelomany.
Izahay dia mijoro manohana ny hafatra navoakan'ny Fivondronan'ny mpandraharaha Meetings mean izay mampiroborobo ny torolàlana farany sy ny torohevitra omen'ny manam-pahaizana ary manentana ny fitohizan'ny fivahinianana fivoriana sy hetsika.
Fikambanana amerikanina mpanatanteraka fikambanana
Susan Robertson, Filoha vonjimaika ary CEO
Don Welsh, filoha ary tale jeneraly
Filan-kevitry ny indostrian'ny hetsika
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fampirantiana sy hetsika
David DuBois, Filoham-pirenena ary CEO
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny mpitantana toerana
Brad Mayne, CVE, Filoham-pirenena ary CEO
Fihaonana Professionals International
Paul M. Van Deventer, filoha ary tale jeneraly
Sherrif Karamat, filoha & CEO
Roger Dow, filoha ary tale jeneraly
Angel Hotel any Palestine dia mampiantrano vahiny 40 nozazaina quarantine ka misy amerikana 14
Heathrow nidina an-dalambe tamin'ny sidina alina be tabataba